Wararkii ugu dambeeyay Kulamo Qado iska soo horjeeda oo Xildhibaanada ku leeyihiin Muqdisho | Puntland
Wararkii ugu dambeeyay Kulamo Qado iska soo horjeeda oo Xildhibaanada ku leeyihiin Muqdisho
Dhaq dhaqaaqyo siyaasadeed oo xoog leh ayaa ka socda magaalada Muqdisho, kaddib markii Baarlamaanka Soomaaliya uu lugaha la galay qalalaase siyaasadeed oo ka dhalatay mooshin ay Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ka keeneen Guddoomiye Jawaari, kaasoo markii dambe Guddiyada Joogtad ay buriyeen, kaddib markii uu dhameystirmi waayay kooramkii loogu tala galay.
Kulamo Qado oo iska soo horjeeda ayaa Xildhibaanada taageersan Guddoomiye Jawaari iyo kuwa mooshinka ka wada ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho.
Mid ka mid ah kulanka ugu xooggan ayaa ka dhici doona Xarunta Villa Hargeysa ee Hoyga Guddoomiye Jawaari, halkaasoo in ka badan 100 Xildhibaan lagu casuumay.
Sidoo kale kulan kale oo qado ah oo ay leeyihiin Xildhibaanada ka soo horjeeda Guddoomiye Jawaari ayaa ka dhici doona Hotelka SYL, waxaana la sheegayaa in kulankan qadada laga soo abaabulayo Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Wariyeyaasha ayaa sheegaya in kulamada siyaasadeed ee maanta ka dhacaya Muqdisho uu ujeedkooda yahay sidii labada dhinac ay u sameyn lahaayeen dhoolatus ay ku soo bandhigayaan tiradooda, si ay u muujiyaan cududooda.
Mooshinka laga keenay Guddoomiye Jawaari ayaa la rumeysan yahay in Xukuumadda ay doorka ug weyn ku leedahay, iyadoo saxiixayaasha mooshinka ay u badnaayeen Xildhibaano Wasiiro ah.
Khilaafka siyaasadeed ee hada ka dhex bilowday Xukuumadda iyo Baarlamaanka ayaa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho hey’adaha dowladda, waxaana muuqataa in Xukuumadda ay iyadu degdegtay, intaan mooshin laga keenin lahaa ay ku bilowday Guddoomiye Jawaari.